ENWEGHI IKE IWEPỤ NGWAỌRỤ NA WINDOWS - WINDOWS - 2019
Ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na iwepụ ngwaọrụ na Windows adịghị efu
A na-ejikarị ewepụ ngwaọrụ ahụ iji wepụ klọp USB ma ọ bụ diski ike dị na Windows 10, 8 na Windows 7, nakwa na XP. O nwere ike ime na akara ngosi mmeri na-apụ n'anya site na Windows taskbar - nke a nwere ike ime ka ọgba aghara ma banye n'ime nzuzu, ma ọ dịghị ihe dị egwu n'ebe a. Ugbu a, anyị ga-alaghachi akara ngosi a na ebe ya.
Rịba ama: na Windows 10 na 8 maka ngwaọrụ ndị akọwapụtara dị ka ngwaọrụ Mgbasa ozi, enweghị akara ngosi na-ewepụ ihe ngosi (egwuregwu, mbadamba Android, ụfọdụ igwe). Ị nwere ike iwepu ha n'ejighi iji njirimara a. Rịba ama na na Windows 10 ngosi nke akara ngosi ahụ nwere ike gbanyụọ na Ntọala - Nhazi - Taskbar - "Họrọ akara ngosi egosiri na ngalaba ọrụ."
Na-emekarị, iji wepụ ngwaọrụ ahụ na Windows, ị pịa akara ngosi kwesịrị ekwesị na nso elekere ahụ na bọtịnụ òké aka ma mee ya. Ebumnuche nke "Wepụ Wepụ" bụ na mgbe ị na-eji ya, ị na-agwa sistemụ arụmọrụ ịchọrọ iwepu ngwaọrụ a (dịka ọmụmaatụ, eriri flash USB). Na nzaghachi na nke a, Windows mejuputara arụmọrụ niile nke nwere ike iduga na nrụrụ aka. N'ọnọdụ ụfọdụ, ọ na-akwụsịkwa ijikwa ngwaọrụ ahụ.
Ọ bụrụ na ịnweghị ike iwepụ ngwaọrụ, nke a nwere ike ịkpata ọnwụ data ma ọ bụ mebie ụgbọala ahụ. Na omume, nke a na-eme n'oge na-adịghị na ya ma enwere ihe ụfọdụ dị mkpa ka a mara ma buru n'uche, lee: Mgbe ị ga-eji ihe mkpofu nchedo.
Esi weghachite mwepụ ngwa ngwa na draịva flash na ngwaọrụ USB ndị ọzọ
Microsoft na-enye aka ọrụ ọrụ ya "Nyochaa ma dozie nsogbu USB" na-edozi kpọmkwem nsogbu dị na Windows 10, 8.1 na Windows 7. Usoro maka iji ya dị ka ndị a:
Gbaa ngwa ibudatara ya ma pịa "Na-esote."
Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, lelee ngwaọrụ ndị ahụ nke nnweta mmeri adịghị arụ ọrụ (ọ bụ ezie na nhazi ahụ ga-etinye ya na usoro ahụ dum).
Chere maka ọrụ iji mezue.
Ọ bụrụ na ihe niile gara nke ọma, a ga-ewepu eriri USB, mpụga ma ọ bụ ngwaọrụ USB ọzọ, mgbe ahụ, akara ngosi ga-apụta.
N'ụzọ na-akpali mmasị, otu ihe ahụ bara uru, ọ bụ ezie na ọ kọghị nke a, na-edozikwa ngosipụta na-adịgide adịgide nke akara ngosi mwepụ nke ngwaọrụ ahụ na mpaghara Windows 10 ngosi (nke a na-egosipụtakarị mgbe ọbụghị ihe ejikọrọ). Ịnwere ike ibudata ọrụ maka nchọpụta akpaka nke ngwaọrụ USB site na weebụsaịtị Microsoft: //support.microsoft.com/ru-ru/help/17614/automatically-diagnose-and-fix-windows-usb-problems.
Esi weghachite akara ngosi ihe nchoputa ihe n'enweghi nsogbu
Mgbe ụfọdụ, n'ihi amaghị ihe kpatara ya, akara ngosi na-ewepụ nsogbu nwere ike ịla. Ọbụna ma ọ bụrụ na ị jikọọ na kpatụ windo ngwa ngwa ugboro ugboro, akara ngosi maka ihe ụfọdụ anaghị apụta. Ọ bụrụ na nke a mere gị (ma nke a bụ ka ikpe ahụ, ma ọ bụghị na ị gaghị abịa ebe a), pịa bọtịnụ Win + R na keyboard ma tinye iwu na windo "Run":
Iwu a na-arụ ọrụ na Windows 10, 8, 7 na XP. Enweghi oghere mgbe njirimara abụghị njehie, ọ kwesịrị ịdị otú ahụ. Mgbe ị na-agbaso iwu a, igbe nkwụnye ihe nkwụsịtụ n'enweghị ihe ọ bụla ịchọrọ imepe.
Windows nchebe mmịpụta okwu
Na windo a, ị nwere ike, dị ka ọ dị na mbụ, họrọ ngwaọrụ ịchọrọ ịmepụ wee pịa bọtịnụ Kwụsị. "Mmetụta dị n'akụkụ" nke imebi iwu a bụ na nchekwa nbudata nke ọma na-enwetaghachi ebe ọ kwesịrị ịbụ.
Ọ bụrụ na ọ na-aga n'ihu na-apụ na oge ọ bụla ịchọrọ iji mezue iwu ahụ a kapịrị ọnụ iji wepụ ngwaọrụ ahụ, pịa aka nri na desktọọpụ, họrọ "New" - "Ụzọ mkpirisi" na na "Ebe ọnọdụ" "tinye iwu ahụ iji weghachite mkparịta ụka nke mkpuchi ngwaọrụ. Na nzọụkwụ nke abụọ nke ịmepụta ụzọ dị mkpirikpi, i nwere ike inye ya aha ọ bụla achọrọ.
Ụzọ ọzọ iji wepụ ngwaọrụ na Windows
Enwere ụzọ ọzọ dị mfe nke na-enye gị ohere iji wepụ ngwaọrụ ahụ ozugbo wepu ihe ngosi Windows taskbar:
Na Kọmputa m, jiri aka nri pịa ngwaọrụ ejiri, pịa Njirimara, wee mepee Akụrụngwa Akụrụngwa ma họrọ ngwaọrụ ịchọrọ. Pịa bọtịnụ "Njirimara," na window meghere - "Gbanwee parameters".
Njirimara Mbanye Njikọ
Na igbe na-esonụ, mepee taabụ "Iwu" ma n'elu ya, ị ga-ahụ njikọ ahụ bụ "Wepụ Ngwaọrụ Wepụ," nke ị nwere ike iji kwalite atụmatụ ahụ achọrọ.
Nke a mezue ntuziaka. Olileanya, ụzọ ndị e depụtara ebe a iji wepụ obere diski ike ma ọ bụ windo mbanye ga-ezu.